Enweghị m ike itinye okwuntughe m na ngwa Ntuziaka | Esi m mac
Kedu ihe kpatara na enweghị m ike itinye okwuntughe m na ngwa Terminal
ọnụ Ọ bụ ngwa nke sistemụ Mac anyị niile webatara. amaghi uzo esi laghachi na isi ihe mbu. Ọ bụ otu n'ime mfe ngwa na anyị nwere ike ọbụna na-akọwa ya dị ka "ike ike" ma arụmọrụ nke ngwa ahụ na-enye anyị enweghị ngụta. Ọ bụrụ n’ị kpalitewo ọchịchọ ịmata ihe, ịmalite ịmalite ị nwere ike ịkpọtụrụ isiokwu nke onye ọrụ ibe anyị bipụtara: Otu esi edepụta iwu niile, ma ọ bụ chọta ọtụtụ ngwa na weebụsaịtị anyị.
Ozugbo anyị banyere n'ime ọnụ, anyị nwere ike ime iwu maka sistemu iji rụọ ọrụ n'ime. Iji maa atụ: ihe mkpuchi doro anya, kpochapụ RAM, kpochapụ njehie ndị na-egbochi usoro iji nwayọọ nwayọọ na-agba ọsọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Iji mee nke ọ bụla n'ime omume ndị a, ọ dị mkpa ịnweta usoro nke usoro achọrọ tinye usoro okwuntughe anyi. Ọ bụ ihe dị mma, n'ihi na ndị mmepe Apple chọrọ ka anyị jide n'aka na ihe anyị na-eme ma gbochie onye ọrụ ọzọ nke Mac anyị ịmetụ ya aka n'amaghị ama.
Yabụ, rue ugbu a, mgbe ọ jụrụ maka "okwuntughe" edepụtara ozi ahụ ma anyị hụrụ iwebata paswọọdụ yana ntụpọ. N'aka nke ọzọ, na mmelite ikpeazụ nke sistemụ ahụ, mgbe okwu okwuntughe pụtara ma anyị bido pịnye okwuntughe, ntụpọ apụtaghị, ọbụnadị na-enye echiche na egbochila mmemme ahụ. Ọ dịghị otú ahụ, naanị ugbu a, ọ naghị alọghachi igodo nke igodo nke okwuntughe. Mgbe ịpị ịbanye, usoro ahụ na-amata ya ma malite usoro a rịọrọ.
Amaghị m ihe kpatara eji eme ya n'ụzọ a, mana ekwesịrị m ikwu na ruo ugbu a ịbanye paswọọdụ, ọ na-eme dị ka ọ mere ruo ugbu a. Ighaghachi kọmputa anaghị eme ka anyị laghachi na usoro gara aga.
Anyị na-atụ anya na Apple ga-achị na mgbanwe a, nke ga-enwe ihe kpatara ya ma ọ bụ nkọwa na ruo ugbu a anyị amaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kedu ihe kpatara na enweghị m ike itinye okwuntughe m na ngwa Terminal
Ihe kpatara m ji were ya bụ otu ihe kpatara na mgbe ị na-ede ederede okwuntughe na ngwaọrụ iOS, "pịa" nke keyboard adịghị ada ụda, naanị iji zere ịnye akara maka ọnụ ọgụgụ mkpụrụ edemede o nwere.
Obu ihe kwesiri otutu ihe ugbu a dika na Linux ma obu iTerm maka mac (bash, zsh). Ọ bụ maka nchekwa: ekpughela ogologo nke okwuntughe na ihuenyo.
F1 2016 egwuregwu ga-ada Mac App Store na Tọzdee a
Ndị Na-aga Mmụọ Mmụọ: Nkọcha nke Onye Witch Witch, Nke Na-enweghị Oge